Virus Takes Toll on Myanmar Economy | Myanmar Business Today
Home Business Local Virus Takes Toll on Myanmar Economy
As this issue goes to print, the new coronavirus has infected over 126,000 people in 124 countries around the world, with death toll topping 4,600 and more than 68,000 people now recovered. Myanmar has had no reported cases, but experts worry that there could be people who are infected but remain undiagnosed.
Authorities have cautioned the public not to trust rumors and fake news and tried to raise awareness about the virus, but public worries are running so high thatarumor on March 12 was enough to make people rush to grocery stores to stock up on food and basic staples.
Events and gatherings have been canceled, including the Armed Forces Day and Academy Awards presentation ceremony. On March 13, the President’s Office announced that Thingyan Festival, the biggest festival in Myanmar, and other public events will be canceled until April 30. An investment forum scheduled to take place in Yangon has also been postponed as the number of Chinese investors visiting the country has plummeted.
The virus posesaserious threat not only to public health but also to the economy – not just in Myanmar but globally. It has disrupted trade flow between Myanmar and its biggest trade partner, China, driving down the volume of trade through two of the four border trade posts. Trade disruptions have also led to shortages of raw materials, the majority of which – pre-virus outbreak – came from China.
“We have raw materials only until the end of April. After April, it’s another story. Unless global authorities get the outbreak under control soon and trade returns normal, there will be problems. It will haveaserious impact on the garment sector as well as on SMEs, tourism and agriculture,” said Daw Khaing Khaing Nwe, joint secretary of the Myanmar Garment Manufacturers Association.
Chinese investments account for 25.15 percent of total investment into Myanmar, making China the second-largest foreign investor after Singapore. It is also Myanmar’s most important trade partner, accounting for $11 billion in bilateral trade. Myanmar exports over $5 billion worth of goods to China annually and the Chinese are major buyers of Myanmar’s agricultural products. Chinese traders have halted activities, resulting in pressure for Myanmar exporters. Reduced access to Chinese raw materials has also hurt factories, including those in the garment sector, who are facing severe shortages that can lead to factory closings or layoffs. The garment industry currently employs around five million women.
“Raw materials for garment factories come from China. We are now concerned by the low raw material supply,” said Union Minister for Commerce Dr. Than Myint.
As impacts of the virus outbreak continue to mount, Myanmar is reconsidering visa on arrival. It has started requiring that visitors entering the country showahealth certificate.
“We, the regional government, are trying to minimize the impact of the virus on our economy. If some of the businesses cannot keep operating, then there will be impacts,” U Phyo Min Thein, Chief Minister of Yangon, said.
The outbreak isawakeup call for Myanmar’s leaders, as news spreads of new coronavirus cases including senior officials and celebrities in several countries. Local authorities have urged people not to trust rumors and keep up to date with government announcements and health advice. The hope is that people will take heed and keep from panicking – as that would only make the situation worse than it already is.
မတ်လ ၁၃ ရက်အထိ လူပေါင်း ၁၂၆၁၅၀ ထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ထားပြီး သေဆုံးသူ ၄၆၃၇ ဦးအထိရှိလာပါတယ် ။ ရောဂါကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ ၆၈၃၁၇ ဦးအထိရှိထားပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၄ နိုင်ငံတွင် ရောဂါပျံ့နှံ့နေပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း လူထုအနေဖြင့် ရောဂါရှိတဲ့ဖြစ်ပွားတာကို စစ်ဆေးမတွေ့ရှိဘဲ လက်တွေ့မှာ ရောဂါအမှန်တကယ်ရှိနေတာမျိုးဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပျံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသတင်းတွေကို အယုံလွယ်တာမျိုးကလည်း လူထုအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကို တိုးစေပါတယ်။ ရောဂါစတွေ့တယ်လို့ ကောလဟာလပျံ့ခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၂ ရက်မှာဆို လူထုက ရိက္ခာကြိုစုဆောင်းကြတာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ သတင်းအမှားတွေလွယ်လွယ်နဲ့မယုံဖို့ နှှိုးဆော်ထားသလို ၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေကိုလည်း အသိပေးထားပါတယ်။
လူစုလူဝေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလည်း ဖျက်လိုက်တာ ၊ ရက်ရွှေ့တာမျိုးတွေကို လုပ်လာပါတယ်။ နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ၊ တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွေကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပတဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေအပါအဝင် ပွဲလမ်းသဘင်တွေကို ဧပြီ ၃၀ ရက်အထိ မပြုလုပ်ကြဖို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအရ သက်ရောက်မှုက ကြီးမားနေပါတယ်။ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြီးမားတဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလမှာဆို မြန်မာနယ်စပ်မှာ တရုတ်ကို ကိုပို့မယ် ကုန်စည်တွေ ပိတ်မိတာတွေရှိပါတယ်။ ဖရဲ ၊ သခွားနဲ့ သီးနှံတင်ပို့မှုတွေကို ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာနှစ်အစကထက်စရင် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ တရုတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ နယ်စပ်စခန်း လေးခုမှာ နှစ်ခုက အရင်နှစ်ကာလတူထက်ကိုနည်းနေပါတယ် ။ အစိုးရနဲ့လာဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအရေအတွက် လျော့နည်းလာသလို ရန်ကုန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကိုလည်း ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်းကြောင့် တရုတ်ကုန်ကြမ်းကို မှီခိုနေရတဲ့ ထုတ်ကုန်အပိုင်းအတွက်ထိခိုက်နေပြီးတော့ ကြာလာရင်ပြတ်လပ်လာနိုင်တဲ့ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အစိုးရအနေနဲ့ အဖြေကြိုရှာသင့်ပါြ့ပီ။
“ လတ်တလောအခြေနေအရတော့ ကုန်ကြမ်းရရှိမူတွေက ဧပြီလကုန်အထိ တော့ရှိနေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အခြေနေရှိဖြစ်နေပြီ။ဒီရောဂါကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မူက ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲမူမရှိဘူးဆိုရင်
ဒီဂယက်က မေ ၊ ဇွန် ၊ ဇူလိုင်အထိ ကိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကာလတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ဃသလငိ ၁၉က ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေသာမက ွနြ လုပ်ငန်းများရော
ခရီးသွားလုပ်ငန်းရော သစ်သီးဝလံလုပ်ငန်းများရော အားလုံးကို ထိခိုက်မူရှိပါတယ် ” လို့ မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဃသလငိ ၁၉ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့
နောက်စပ်တွဲကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ့င်္ဃဃြှု ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာရဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ ၂၅ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းက တရုတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ စင်ကာပူပြီးရင် အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်စဉ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုက ကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံအထက် ရှိပါတယ်။ မြန်မာပို့ကုန် နှစ်စဉ် ကန်ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံအထက်ကို ပုံမှန်တင်သွင်းနေသလို လယ်ယာထွက်ကုန်စည်အများဆုံးတင်ပို့လို့ရတဲ့ ဝယ်လက်ကလည်း တရုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုသတင်းကြောင့် နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာ တရုတ်ကုန်သည်တွေထွက်မလာတော့တာကလည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှီခိုနေရတဲ့ ကုန်သည်တွေအတွက် ထိခိုက်စရာပါ။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံအတွင်းက စက်ရုံတချို့အတွက်လည်း ထိခိုက်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ စက်ရုံတွေကို ပိတ်သိမ်းဖြစ်တာကစလို့ အလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာမျိုးရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလာရေအာက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး အမျိုးသမီးပေါင်း ငါးသိန်းကျော်ကို အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းဖန်တီးပေးထားခဲ့တဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစက်ရုံအချို့က လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာ တွေကို ပြုလုပ်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပွားပြီး အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမူတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။“နောက်ထပ်လည်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တွေရှိပါတယ်။
“ ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကုန်ကြမ်းတွေကို တရုတ်ပြည်ကနေ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီး တင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဟိုဘက်က အခြေနေကြောင့် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမူလျော့နည်းခဲ့တဲ့အတွက်
စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ဒီရောဂါသည် တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေအပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမူတွေရှိခဲ့ပါတယ်”လို့ စီပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ဆိုပါတယ်။
ကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှှုန်းကျဆင်းလာတာမျိုးကြုံနေရသလို ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကို ထိခိုက်လာတဲ့အတွက် အစိုးရက အရင်ကထုတ်ပေးထားတဲ့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာခွင့်ပြုမှုတွေကို ပြန်လည်စိစစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံထဲ ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တွေကို တောင်းခံလာပြီးတော့ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်အတွက် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကို ကြိုတင်တွက်ချက်သင့်ပါတယ်။
“ ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားအရထိခိုက်လာနိုင်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အချို့လုပ်ငန်းတွေက ဆက်မလည်ပတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်”လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုဆို ရောဂါပျံ့နှံ့မှုက တကမ္ဘာလုံးကို သတိချပ်စရာဖြစ်လာစေသလို အစိုးရအကြီးအကဲတွေ၊ ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင်တွေ နဲ့ အားကစားသမားတွေ ကူးစက်လာတဲ့သတင်းတွေကြားရတာက စိုးရိမ်စိတ်ကို တိုးလာစေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးပြန်လာသက်သာလာသူတွေရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းအင်တာဗျုးတွေမှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့ ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းနေထိုင်ဖို့နဲ့ ကောလဟာလသတင်းတွေကို အယုံမလွယ်ဖို့ ဖြေထားကြပါတယ်။
Previous article12 Days on the Silk Road
Next articlePrudential, Yoma Bank Sign Partnership Agreement